Computer system and - Anglais - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: computer system and its confidential method (Anglais - Birman)
အလွှာ မျက်နှာဖုံးနဲ့ ၄င်းရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားပါ
the impact of the pandemic and its mortality rate are different for men and women.
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုနှင့် ယင်းကြောင့် သေဆုံးနှုန်းသည် ယောက်ျားနှင့် မိန်းမအကြား ကွာခြားသည်။
and it get the chest pain
နောက် အဲဒါက ရင်ဘတ်အောင့်စေတယ်
ထိုသို့သောအားဖြင့် သင်တို့သည် သက်သေခံရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်။
ကိုယ်တော်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ကြသောအချိန်ကား၊ နံနက်တချက်တည်းအချိန်ဖြစ်သတည်း။
ယာကုပ်ပြေးကြောင်းကို၊ သုံးရက်မြောက်သော နေ့၌ လာဗန်ကြားသိလျှင်၊
mers-cov and its closest relative bat cov-hku25 share only 87% nucleotide sequence homology.
mers-cov နှင့် ၎င်း၏အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သော လင်းနို့ cov-hku25 တို့သည် မျိုးရိုးဗီဇအခြေခံကလပ်စည်း အစီအစဉ်တူညီမှု 87% ကိုသာ မျှဝေပါသည်။
ထာဝရဘုရားသည် ဗျာဒိတ်တော်ကို ယာကုပ် အမျိုးသို့လွှတ်၍၊ ဣသရေလအမျိုးအပေါ်မှာ သက် ရောက်စေတော်မူ၏။
("%s") မှာရွေးချယ်ထားတာ တစ်ဖိုင်ပဲရှိသည် ခွေ၏ပုံရိပ်ဖိုင်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာများကို ရေးယူနိုင်သည်
ထိုအခါ ငါးကြီးသည် ထာဝရဘုရား၏ အမိန့် တော်ကို ခံ၍ ယောနကို ကုန်းပေါ်သို့ အန်လေ၏။
ယေရှုသည် ရွှံ့လုပ်၍ သူ၏မျက်စိကို ပွင့်တော်မူသောနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သတည်း။
ထိုနည်းတူအာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၊ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ် ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။
ဆောင်းကာလဖြစ်၍ အင်္ကနိပွဲကို ယေရုရှလင်မြို့၌ခံကြသောအခါ၊
ထိုအခါထာဝရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြ လတံ့ဟု ဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏။
ကျေးဇူးဆပ်တော်မူရမည်အကြောင်း၊ ထာဝရ ဘုရား၌ အဘယ်သူသည် ကျေးဇူးပြုဘူးသနည်း။
teplou (Tchèque>Polonais)mancis (Malais>Anglais)हिंदी सेक्सी video baf (Anglais>Hindi)dobre viecher (Slovaque>Anglais)antes se cogeaun mentiroso queaun cojo (Espagnol>Latin)pejam mata (Malais>Anglais)maiuscola (Italien>Allemand)redibis (Latin>Italien)ano tagalog sa shim (Anglais>Tagalog)हस्तशिल्प (Hindi>Portugais)quiet day (Espagnol>Anglais)africana (Anglais>Français)kylpyhuoneen (Finnois>Anglais)thức ăn ngon đấy (Vietnamien>Anglais)feeling existed (Anglais>Hindi)trauma telugu meaning (Anglais>Télougou)neljännestabletti (Finnois>Anglais)मारवाड़ी सेक्सी (Hindi>Anglais)provenance et qualité des matériaux (Français>Arabe)uitlegging (Afrikaans>Birman)siktir git (Turc>Anglais)внимание (Russe>Français)in (Hausa>Tchèque)so sweet talking you (Anglais>Hindi)tu eres mi hombre perfecto te amo (Espagnol>Anglais)